Ogaden News Agency (ONA) – Haya’adda Daryeelka Agoonta ee Bariga Afrika oo u qaybisay ardayda Dugsiyada Xirsi Mahad qalab waxbarasho
Haya’adda Daryeelka Agoonta ee Bariga Afrika oo u qaybisay ardayda Dugsiyada Xirsi Mahad qalab waxbarasho
Posted by ONA Admin	/ February 22, 2014
Hay’ada daryeelka agoonta ee bariga Afrika ayaa maalin nimadii jamcaha oo ay taariikhdu kubeegnayd 21/2/14 qalab waxbarasho kaqaybisay madarisooyinka XIRSI MAHAD ee ku yaala deegaanka Dhadhaab. Qalabkan wax barasho ayaa isugu jiray Kutub Qur’aan ah, Buugaag, qalimaan iyo boorsooyinka qalabka arday lagu qaado.
Hay’ada daryeelka agoonta oo ah hay’ad maxali ah kana howlgasha bariga Africa ayaa deeqda ardayda lasiiyay kasoo qaaday hay’ad caalami ah oo kadiiwaan gashanw wadanka Turkiga, mana aha markii ugu horaysay ee ay labadan hay’adood agoonta iyo dadka danyarta ah ee ku dhaqaan Dhadhaab deeqo kala duwan siiyaan. Waxay dhow jeer oo hore kaalmo ugu fidiyeen dadka danyarta ah ee S.Ogadenia ee kudhaqan deegaanada Dhadhaab iyo Faafi gaar ahaan ardayda dhigata madarisooyinka Xirsi Mahad ( Hirsi mahad Academy)
Qaybinta deeqdan loogu talagalay ardayda madarasa Xirsi Mahad ayaa jimcihii ka bilaabatay xeryaha Xagardheere, Ifo iyo Dhagaxlay iyadoo isla shalayba soo dhamaatay. Waalidiinta iyo macalimiinta ardayda ayaa ugu horayn umahad celiyay Allaah S.W oo suuragaliyay in ay deeqdan soo gaadho, waxaa kale oo ay umahad celiyeen hay’adaha soo gaadhsiiyay deeqdan oo kala ah Horn of Africa Orphan Relief Org. iyo hay’ada Turkiga ah waxayna kacodsadeen in ay sii wadaan caawimaada ay ufidiyaan dadka danyarta ah gaar ahaan ardayda dhigata madarasada Xirsi Mahad.
Gudoomiyaha hay’ada daryeelka agoonta ee Bariga Africa oo ONA lahadlay ayaa sheegay in ay kutala jiraan sidii ay waxbadan uga caawin lahaayeen agoonta iyo danyarta dhigata madaarista XIRSIMAHAD, iyagoo ka codsanaya Jaaliyadaha S.Ogadenya inay agoonta iyo dadkooda tabaalaysan ee xeryaha ku jira la socdaan oo aanay ka daalin gargaarkooda.